Ka-xisaabiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare > Xusuus-dhaafka
Faa'iidooyinka OTC ee Xubnaha Labada ah ee MA
2022 MA Dual Plan (HMO SNP) xubnaha ayaa qarash garayn kara $ 350 oo ah alaabta caafimaadka ee farmashiyaha laga iibsado 3dii biloodba mar, ilaa $ 1,400 faa'idada guud sanadkiiba (laga kordhiyay $ 250 3dii biloodba 2021).
Hel amarada laguugu soo diro gurigaaga. Shixnad, maarayn, iyo canshuur ayaa na saaran!
Fiiro gaar ah: Faa'iidooyinka aan la qorin ee ka-hortagga ah ayaa ku jira annaga MA Dual Plan (HMO SNP) kaliya.
Badeecadaha La-Iibinta (OTC)
2022 OTC Catalog Coming Soon
2022 OTC Catalog (Far Weyn) Oo Soo Socota Dhawaan
Catálogo de productos a venta libre 2022 Coming Soon
Eeg 2021 Katalooj-ka-Soo-horjeeda
➔ Baadhitaan ku samee Catalog-kayaga 2021
Baadhitaankeena 2021-ka Kaataabiska Ka-Talinta (Farta Weyn)
Re Baadhitaan nuestro catálogo de productos a venta libre 2021
Ha arkin shayga aad u baahan tahay? Waxaa laga yaabaa in weli la daboolo. Si aad u hubiso haddii lagu daray liis -garaynta, ka wac Adeegga Macmiilka 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 am ilaa 8:00 pm, 7 maalmood usbuucii.
Sida loo Dalbo Amarka
Waxaad u baahan doontaa kaarkaaga aqoonsiga xubinta Faa'idada Medicare -ka CHPW iyo taariikhda dhalashada si aad u dalbato.
Online: Websaydhka Isha Dawada
Telefoonka: 1-877-603-0402 (TTY: Garaac 711), 6:30 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
Adreeska: Buuxi dalabka dalabka* oo raac tilmaamaha boostada ee ku jira.
Faks ahaan: Buuxi dalabka dalabka* iyo fakis u dir 1-874-258-1913
*Foomka dalabka OTC iyo macluumaad dheeri ah oo ku yaal Buugga Wax -soo -saarka OTC (2022 OTC Catalog Product Product Goordhow)
Wax soosaarka OTC waxaa loogu talagalay kaliya isticmaalka xubinta si looga caawiyo baahi caafimaad ama caafimaad. CHPW Medicare Advantage waxay mamnuucaysaa adeegsiga dheeftan si loogu dalbado alaabada OTC xubnaha qoyska iyo asxaabta.
Waxyaabaha OTC waxaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo bixinta guriga oo keliya. Alaabada lagama iibsan karo farmashiyaha deegaanka ama ilo kale oo aan ahayn bixiyaha amarka boostada.
Waxyaabaha OTC ee lumay ama la xaday lama soo celin karo lamana beddeli doono.
Dabeecadda shaqsiyadeed ee alaabtan awgeed, soo celinta lama aqbali karo.
Waxyaabaha ku qoran buugga ayaa isbeddeli kara sanadka oo dhan. Liistada ugu casrisan ee waxyaabaha la heli karo, fadlan tag daroogada.com.